Teendhooyinka iyo noocyadooda | Kalluunka
ka teendhooyin Iyagu waa kalluunka inta badan keli keli noqda aquariums-ka iyo balliyada noocyadooda kala duwan. Adoo yeelanaya awood balaaran kaga badbaado xaaladaha daran waxaad u adeegtay si aad uga dhigto mid ka mid ah noocyada aadka loo dalbado ee hiwaayadda aquarium.
Ugu horreyntii, waa in la ogaadaa in carp aan la siinin si uu awood ugu yeesho inuu si buuxda ugu noolaado taangiyada kalluunka ku wareegsan, kalluunkan ayaa aad ugu baahan meel lagu horumariyo laguna tarmo iyada oo aan wax dhibaato ah ama xaddid ah lahayn. Sidaa awgeed aquariumyada ku habboon ee dayactirka kaaribku waxay ka yimaadaan 100 litir.
Waxay yihiin kalluun aad u adkaysi badan oo adag. Ku carp waxaad leedahay miisaanno dhaldhalaalaya oo waaweyn. Aquariums-yada guryaha yar yar ee dadku ku badan yihiin waxay ku soo bandhigi karaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka dagaal ee ku wajahan noocyada daciifka ah. In kasta oo waxa ugu caadiga ahi ay yihiin inay yihiin kalluun nabdoon oo kalluunka intiisa kale kula nool.
Waxay u adkeystaan ​​qabow ka fiican kuleylka, maadaama tani ay waddo ogsijiin la'aan. Xilliga jiilaalka haddii ay si fiican u dhergaan waxay noqdaan kuwo caajis badan oo balliyada qoto dheer ee ku filan xitaa iska celiya dhaxan. Sidoo kale waa run inay la qabsadaan heerkul kasta oo daciifa.
Kaarbaatku badanaa wuxuu cunaa dixiriga dhulka, dixiriga, qolofta iyo cayayaanka. Waxay si fiican u aqbalaan cuntada jilicsan markay tahay noocyada yaryar ee yaryar. Si loo siiyo cunto dhameystiran, way ku habboon tahay in lagu miisaamo miisaanka cuntada nool ama qabow; Artemia, Daphnias iyo dirxiga kaneecada.
Carp waxaa iska leh qoyska reer Cyprinidae. Iyo noocyada ugu caansan ee la yaqaan waa Carasius Auratus, Cyprinus carpio iyo Cyprinus carassius. Ku Qaniinyada Mareykanka waa noocyada ugu baahsan. Waxay leedahay awood weyn oo la-qabsasho iyo iska caabin ah dayactirkeeda xaaladaha daran.
El Daboolka xijaabka o RyukinLoogu magac daray baalasheeda dhaadheer, waxay leedahay jir jilicsan oo ka gaaban comet-ka. Oranda wuxuu soo bandhigayaa isku ekaysiin weyn Cola de Velo, marka laga reebo papillae cephalic. Ku Isha xumbada ama Ttelescope Waa noocyada leh indhaha soo baxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Teendhooyinka iyo noocyadooda
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax badan ka barto cuntadooda quudintooda iyo waliba qaybta taranka balliyada